Uma uthola izidumbu zomsedari ezandleni zakho , khona-ke ungazama ukukhulisa umuthi omuhle kusuka kumbewu. Umzamo omncane - futhi ungathola imbewu enhle. Imininingwane mayelana nokuthi ungatshala kanjani umsedari emgqeni, isihloko sethu sizoxoxa. Landela zonke izincomo, futhi umphumela uzoba.
Kunezindlela eziningana ezahlukene zokutshala umsedari kusuka kumnumzane. Kunoma yikuphi, kudingeka ukuhlunga imbewu - lokhu kusho ukuthi kudingeka agcinwe ekushiseni okuphansi izinyanga ezimbalwa. Uma uzodla imisedari emthini womuthi ekhaya, kuyadingeka ukulingisa izimo zemvelo lapho lesi sihlahla sikhula khona. Uma uthola imbewu ngasekupheleni kwehlobo noma ekwindla zakuqala, kufanele usitshale nje emhlabathini ovulekile - bese kuthi entwasahlobo elandelayo uzothola izithombo. Yiqiniso, kuphela uma izinto zokutshala zinekhwalithi ephezulu.
Indlela yokukhulisa umsedari emgqeni? Ukhetho lwesibili
Le ndlela ifana nokuphoqeleka kwezimbali ezinamaqabunga (hyacinths, tulips). Okokuqala udinga ukulungisa umhlaba (noma uthenge ngomumo). Okufanelekile, kufanele kube ingxube ye-sawdust nesihlabathi. Emhlabathini olungiselelwe, faka imbewu, uyihlanganise kancane nge-atomizer bese uyibeka esiqandisini (eshalofini elingaphansi), lapho imbewu kufanele ibanjwe khona okungenani izinyanga ezintathu. Njengoba ukomisa, inhlabathi idinga ukusizwa kancane, kodwa hhayi kakhulu. Ngemuva kwezinyanga ezintathu, imbewu isuswa esiqandisini (mhlawumbe uma kwenzeka entwasahlobo) futhi iphathwa ngesisombululo esingenakulinganiswa se-potassium permanganate. Kumelwe kwenziwe ngesisombululo izinsuku ezimbili. Imbewu yehlumela kumele ibe ngxube elungisiwe lomhlabathi kanye ne-sawdust.
Indlela yokukhulisa umsedari emgqeni? Indlela esheshayo
Uma ungeke usebenzise izinyanga ezintathu ukuze unciphise imbewu, ungasebenzisa indlela yokuqamba okusheshayo. Kodwa kulokhu, kufanele ulandele ngokucophelela imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo, kuphela uma ungaba nemiphumela. Okunye okubaluleke kakhulu ukuthi izinga lembewu - kufanele libe yizihlahla zomsedari ezihlanzekile futhi ezivuthiwe, ngephunga elimnandi futhi lingenalutho lokubumba noma ezinye izinhlamba ezisolisayo. Thatha ezinye izingcezu ebhakeni ozolihlwanyela - kufanele uzizwe unambitheka we-cedar bese ubona inyama ehlanzekile emanzini ngamunye. Hlaza imbewu, hlambulula ngamanzi afudumele (ungakwazi ukugcoba kancane nge-toothbrush esithambile - lokhu kuzowahlanza ngokushukela, futhi umswakama ovela emgodleni uzobe lula ukuthola ngaphakathi kwenzalo). Ngemuva kokulungiswa, isiteji senziwa ngokuqondile. Imbewu ifakwa emanzini abandayo. Ukushisa kwalo akufanele kube ngaphezu kwamazinga e-zero. Bema kule ndawo izinsuku ezintathu noma ezine. Kubalulekile ukuqapha izinga lokushisa kwamanzi - akufanele ukushisa, kungenjalo konke kuzohamba kahle. Lokhu kungafinyelelwa ngokufaka ngezikhathi ezithile, isibonelo, ama-ice cubes. Landela ngokucophelela amandla lapho amantongomane akho afakwa khona ukuklanywa. Uzobona ukuthi ezinye zazo zizozama phansi. Lesi yisigaba esibaluleke kakhulu. Ukuthi amantongomane ancishiselwa phansi kwesitsha kusho ukuthi kufanelekile ukutshala. I-substandard ihlala ngenhla. Lokho kuzoba cishe ingxenye. Thatha labo abawile, bafake inhlanganisela yenhlabathi elungisiwe (izinga lokushisa layo kufanele lilingane namadridi ayishumi nanhlanu). Manje uyazi zonke izindlela ezintathu ukuthi ungakhula kanjani umsedari emgqeni.
Spring. Yini ongatshala ngoMashi?
Phraseologism Umlando "Yizimpukane musa ubuhlungu": umsuka, incazelo kanye nencazelo